Ikhaya » Iindaba Zamalungelo Oluntu » Ikomiti yamalungelo abantwana ye-UN iphonononge iArgentina, iAngola, iAlgeria, iMontenegro, iRussia, iLesotho neNorway
Ikomiti yamalungelo abantwana ye-UN iphonononge iArgentina, iAngola, iAlgeria, iMontenegro, iRussia, iLesotho neNorway
Ngamana 11, 2018
Ngamana 10, 2018
IKomiti yeZizwe eziManyeneyo yamaLungelo oMntwana iza kudibana eGeneva ukusukela nge-14 kaMeyi ukuya nge-1 kaJuni 2018 ukuphonononga amalungelo abantwana kula mazwe alandelayo: iArgentina, iAngola, iAlgeria, iMontenegro, iRussian Federation, iLesotho neNorway.
IKomiti, ebunjwe ziingcali ezizimeleyo ezili-18, ibeka iliso kwindlela Amazwe athe avuma iNgqungquthela yamaLungelo oMntwana (CRC) ukuba ayayithobela kusini na imbophelelo yabo; IArgentina, iAngola, iMontenegro, iLesotho neNorway ziya kujongwa phantsi kwale Ngqungquthela.
IKomiti iza kuphonononga ukuthobela i-Angola kunye ne-Russian Federation kwi-Optional Protocol ekuthengisweni kwabantwana, ukuthengisa ngomzimba kwabantwana kunye ne-pornography yabantwana (i-OPSC). Izakuphinda ijonge ukubambelela kweAngola neAlgeria kuMgaqo wokuZikhethela wokubandakanyeka kwabantwana kwimilo exhobileyo (i-OPAC).
Amazwe abandakanyekayo kwiNgqungquthela kunye / okanye iiprothokholi zokuqala ezimbini zoKhetho kufuneka angenise ingxelo ezibhaliweyo rhoqo kwiKomiti. Ngexesha leentlanganiso eGeneva, amalungu eKomiti abamba iiseshoni zemibuzo kunye neempendulo kunye nabathunywa bakarhulumente abachaphazelekayo. IKomiti isekela uvavanyo lwayo kwingxelo yombutho kaRhulumente kunye neempendulo ezibhaliweyo kuluhlu lwemiba yeCRC, iimpendulo zabathunywa kwanolwazi oluvela kwamanye amaqumrhu eUN kunye neeNGO.
I-CRC izakupapasha iziphumo zayo, ezaziwa njengokuqukumbela ngoLwesithathu, nge-6 kaJuni 2018. Ingqungquthela yeendaba eza kunikezela ngeziphumo icwangciselwe u-12: 30 kwangalo suku lunye kwigumbi loonondaba ePalais des Nations eGeneva.